Shiine Firfircoon Qaylada Macaamiisha Lagu Sameeyay Logo low moq habeeya sameecadda dhageysiga codka ee ANC 808 Dhagaha Dhagaha ee wireless-ka ah ee Bluetooth oo leh Microphone Soo-saar iyo Warshad | Yong Fang
Xakamaynta Qaylada Firfircoon ee La Sameeyay Logo hooseeya oo loo yaqaan 'moq low customized' oo loo habeeyo taleefanka dhegaha ee 'ANC 808' sameecadaha wireless-ka ah ee Bluetooth oo leh Microphone
Cabbirka Badeecada: 175 (L) * 80 (W) * 200 (H) MM;
Xalka Bluetooth: BK 3266 V5.0
Xalka ANC: LM5896
Astaanta taageerada A2DP / AVRCP / HFP
Qaybta Darawalka: 40mm, 32ohm;
Jawaabta Joogtada ah: 20Hz-20KHz;
Awood bixinta: 3.7V, 400mAh Battery Lithium;
Soo saarida Awoodda: 35mW;
Baaxadda inta jeer ee dhimista sawaxanka: 40-600Hz;
Heerka yareynta Buuqda: 20 +/- 2dB;
Yaraynta Sawaxanka inta jeer ee dhexe: qiyaastii 100Hz-300Hz;
Masaafada shaqada: 10Meter;
Saacadaha shaqada: ilaa 10hours;
Magaca badeecada ： ANC-808
No Sawaxan firfircoon oo baajinaya illaa 18-22dB】Headphone-ka ANC wuxuu si firfircoon u ogaan karaa sawaxanka deegaanka iyadoo loo marayo nidaamka joojinta qeylada firfircoon ee laga dhex dhisay gudaha headphone-ka. Waxaa loogu talagalay Feed Forward ANC technology. Heerka dhimista dhawaaqa waa min 18 dB ilaa 22 dB. Marka, markaan ku jirno duulimaad, tareen, metro, ama ku socoshada waddooyinka dadweynaha ama suuqyada waaweyn, headphone-ka 'ANC' wuxuu si fiican u baajin karaa buuqa wuxuuna kuu abuuri karaa adduun adiga kuu fiican;
Mm 40mm neodymium wadayaasha baasaaska powerfulKuwa ku hadla headphone-kaan waxaa loo habeeyay iyadoo lagu saleynayo qaab dhismeedka guryaha cod-bixinta ee ay taageerto ANC. Waxay soo saartaa baas aad u xoog badan oo leh dhawaaq cad oo cad. Haddii aan wareejino hawsha ANC, dhageysiga ama khibrada wada xiriirka ayaa noqon doonta mid la yaab leh;
Design Naqshad isku-habeyn & Naqshadeynta Miisaanka DesignFoomka dhagaha ee dhimista dhawaaqa waa mid loo adeegsan karo inuu ku habboonaado cabirka madaxa isticmaalayaasha kala duwan. Iyo, dhagaha dhagaha ayaa lagu laaban karaa gudaha, nashqad dhismeedka qaab dhismeedka burburin kara ayaa sameeya headphone-ka wireless-ka ah waxaa loo laaban karaa cabirro aad u yar. Sameecadaha dhagaha ayaa laga sameeyaa maadooyin tayo sare leh oo miisaan fudud leh iyo waxyaabo maqaar aad u jilicsan oo jilicsan. Marka sidaas la sameeyo, sameecadda dhagaha ee bilaa xadhigga ah waa mid fudud;
【Sii Shaqaynta 12 Saacadood Joogsi La'aan ah】Waxaa jira batari lithium dib u soo celin kara 400mAh oo ku jira gudaha taleefanka gacanta. Caadi ahaan, waxay shaqeyn kartaa 12 saacadood joogsi la'aan. Haddii lagu wareejiyo shaqada ANC, waxay shaqeyn kartaa 10 saacadood joogsi la'aan.
【Loogu talagalay 3.5mm Aux In Socket】headphone-ka wireless-ka ah waxaa loo isticmaali karaa inuu yahay headphone-ka xadhkaha goostay. Waxaa loogu talagalay oo leh heer caalami ah oo caadi ah 3.5mm. Iyo, waxaa jira 3.5mm ilaa 3.5mm fiilo dheeri ah oo dheeri ah sida qalabkeeda. Marka, headphone-ka wireless-ka ah ee wireless-ka ah wuxuu u shaqeyn karaa sidii caadi caalami ah oo ku xiran taleefanka madaxa muusikada madaxa.
Access Agabyo gaar ah iyo Ikhtiyaarro Dheeraad ah】Qalabkan dhegaha, qalabka caadiga ahi wuxuu noqon doonaa hage deg deg ah, fiilo awood leh, fiilo maqal ah, iyo qalabka ikhtiyaariga ahi wuxuu noqon doonaa kiish yar oo la qaadan karo iyo kiis EVA la cabi karo. Maaddaama headphone-ka wireless-ka ah uu burburi karo, haddii uu la yimaado boorso la habeeyay ama kiiska uumiga loo habeeyay, waxay noqon doontaa mid aad noogu habboon inaan ku qaadno meel walba oo aan aadno.
Hore: Naqshadeynta Naqshadeynta Tws Warshaddii Dhagaha ee Tooska ah Iibinta Dhagaha Dhagaha Dhagaha ee wirelesska leh ee leh Taabashada Taabashada
Sameecadaha Dhagaha ee Biyo La'aanta ah
Sameecadaha Dhagaha La '
Sameecadaha wireless-ka ee loogu talagalay Android
Dhageystayaasha wireless-ka ah ee Tv-ga
Dhageystayaasha bilaa siliga ah ee leh Mic
Wireless On Ear Earphones
OEM Custom Logo ANC Dhawaaqa Cod Tayo Sare Tayo Sare ...